Adzooma: एक प्लेटफर्ममा तपाईको गुगल, माईक्रोसफ्ट, र फेसबुक विज्ञापन व्यवस्थापन र अनुकूलन गर्नुहोस् Martech Zone
Adzooma गुगल पार्टनर, माइक्रोसफ्ट पार्टनर, र फेसबुक मार्केटिंग पार्टनर हो। तिनीहरूले एक बुद्धिमान, प्रयोग-गर्न-सजिलो प्लेटफर्म बनाएका छन् जहाँ तपाईं Google विज्ञापनहरू, माइक्रोसफ्ट विज्ञापनहरू, र फेसबुक विज्ञापनहरू सबै केन्द्रिय रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। Adzooma दुबै कम्पनीहरु को लागी एक अन्त समाधान को रूप मा साथै ग्राहकहरु को प्रबंधन को लागी एक एजेन्सी समाधान प्रदान गर्दछ र 12,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु द्वारा यो विश्वास छ।
Adzooma को साथ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी तपाईंको अभियानहरू एक नजर मा प्रदर्शन गर्दै छन् कुञ्जी मेट्रिक्स जस्तै छापहरू, क्लिक, रूपान्तरणहरू र लागतसँग। फिल्टर गर्नुहोस् र अभियानहरू इंगित गर्नुहोस् जुन तपाईंको ध्यान र कार्यहरू परिवर्तन गर्दछ जुन तपाईंले सेकेन्डमा गर्न आवश्यक पर्दछ।
Adzooma मा तपाईंको विज्ञापन अभियान प्रबन्ध गर्नुहोस्
Adzooma सुविधाहरू र लाभहरू
Adzooma को प्लेटफर्मले तपाईलाई सरल 'एकै ठाउँमा सबै' तनावमुक्त विज्ञापन व्यवस्थापनलाई जवाफ दिन्छ। यो ग्राउन्ड अप विशेषज्ञहरु द्वारा डिजाइन गरीएको छ, चाँडै तपाईको दैनिक पीपीसी कार्यभार लाई कम गर्न।
व्यवस्थापन - स्ल्याश समय यो सफलतापूर्वक बहु गुगल, फेसबुक, र माईक्रोसफ्ट खाता व्यवस्थापन गर्न लिन्छ। Adzooma तपाईलाई एकल च्यानलमा बहु विज्ञापन खाताहरूसँग कनेक्ट हुन सक्षम गर्दछ।
सुझाव - Adzooma को अवसर ईन्जिन विज्ञापन गर्छ र बेकारमा कम गर्न सल्लाह दिन्छ र विज्ञापन खर्चमा तपाईंको फिर्ती बढाउन।
अनुकूलन - २ optim०+ मेट्रिक्समा आधारित विशेषज्ञ अप्टिमाइजेसनहरू प्रयोग गर्नुहोस्, सबै क्लिकमा निरन्तर अभियान प्रदर्शन सुधार गर्न। Adzooma एक राम्रो अनुभव प्रदान गर्न मेशिन शिक्षा सम्मिलित गर्दछ।
स्वचालन - समय बचत गर्न र Adzooma लाई तपाईंको २//24 स्वचालित सहायकमा बदल्न नियम-आधारित स्वचालन प्रयोग गर्नुहोस्। स्वचालित रूपमा तपाईंको अभियानहरू रोक्नुहोस् जब उनीहरू तपाईंको खर्च टोपीमा पुग्छन् वा तपाईंको बजेट सुरक्षित गर्न खराब प्रदर्शन गर्ने कुञ्जी शव्दहरूमा तपाईंको बोलपत्रहरू कम गर्दछ।
सूचनाहरू - स्वचालित नियमहरू ट्रिगर हुँदा सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
रिपोर्ट - एक साधारण सिंहावलोकन प्राप्त गर्नुहोस् र एक स्क्रिनबाट सबै तपाईंको बजेट समायोजित गर्नुहोस्। फिल्टर, क्रमबद्ध, निर्मित टेम्पलेट्स, र निर्यात रिपोर्टहरू तपाईले के हेर्नु पर्छ के आधारमा।
समर्थन - सदस्यहरू मात्र फेसबुक समुदाय मा सामेल हुनुहोस्, ईमेल को अलावा, प्रत्यक्ष कुराकानी, र फोन समर्थन।
एजेंसी बजार - Adzooma ले एजेन्सीहरूलाई विज्ञापनहरू खोज्न र फेला पार्न विज्ञापन एजेन्सीहरूको लागि तिनीहरूको निर्देशिकामा सामेल हुन अनुमति दिन्छ।
Adzooma यसको प्लेटफर्मको लागि असीमित विज्ञापन खर्च, असीमित विज्ञापन खाताहरू, र असीमित प्रयोगकर्ता प्रस्ताव गर्दछ! एउटा स्मार्ट, शक्तिशाली, र प्रयोग गर्न सजिलो प्लेटफर्म पाउनुहोस् जुन तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ। आज नि: शुल्क सुरू गर्नुहोस्!
बजारका लागि Adzooma एजेन्सीहरूको लागि Adzooma
प्रकटीकरण: म एक हुँ Adzooma सम्बद्ध र यी लेखहरु को लागी ती लिंकहरु को उपयोग गर्दै छु।
टैग: विज्ञापन व्यवस्थापन प्लेटफर्मविज्ञापन प्लेटफर्मविज्ञापनadzoomaफेसबुक विज्ञापनगुगल विज्ञापनमाइक्रोसफ्ट विज्ञापनप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्पीपीसीppc विज्ञापन